Halkan ka daawo:Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka oo furay kulan lagu gorfeynayey sidii looga gaashaman lahaa abaaraha
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo-tire) ayaa furay kulan lagu gorfeynayey sidii looga gaashaman lahaa abaaraha soo noqnoqonaya, iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha dadyowga reer miyiga.
Halkan ka Daawo:-Wasiirka Qosheynta JSL Oo Qalab isgaadhsiin Casriya iyo Gaadhi Ku Warejiyay Komoshinka Dooroshoyinka Qaranka
Wasiirka wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mud.Maxamed Ibrahim Adan (Qabyo-tire) oo Qalab isgaadhsiin casri ah iyo Gaadhi ku wareejiyay komishanka doorashooyinka qaranka
Tobabar uga furmay qaar kamida shaqaalaha Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta
Tababarkan oo ku saabsan la socodka ibedelka sicirka suuqa ayey ka qaybqaadanayeen qaar ka mida shaqaalaha waaxda xog-ururinta Wasaaradda Qorshaynta.
Tababarkan oo socon doona mudo laba maalmooda ayey ujeedadiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfada shaqaalaha waaxda xog-ururinta ee Wasaaradda Qorshaynta ee la xidhiidha dhinaca isbedelka sicirka miceeshada suuqyada iyadoo lagu tababarayo ka soo qaybgalayaasha la socodka isbedelka sicirka suuqa. Casharada ay tababarka ku qaadan doonaan ayaa iskugu jira sidii loo falanqayn lahaa macluumaadka ku saabsan isbedelka sicirka suuqa iyo sidii loo fahmi lahaa xisaabinta miceeshada ee suuqa.
Dhamaadka tababarka ayaa laga rajaynayaa inay shaqaaluhu aqoon buuxda u yeelan doonaan nidaamka cabirka sicirka suuqa.
Wasiirka wasaaradda qorshaynta oo xafiiskisa ku qaabilay xubno ka socday Hay’ada World Vision
Xubanaha waftigan oo ka koobnaa masuuliyiinta hay’adaasi ee xafiisyada hay’adu ay ku leedahay Hargeysa, Nairobi iyo Australia.
Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii labad dhinac uga wada hadli lahaayeen sii xoojinta wada shaqaynta xukuumada iyo hay’ada World Vison. Hay’ada World Vision ayaa sanadkii dhamaaday ee 2016, waxay dalka ka fulisay mashaariic horumarineed oo ku kacay lacag dhan 4.8 million dollar sida ay masuuliyiinta hay’adu ku sheegeen kulankan, kuwaasoo iskugu jiray ayay yidhaahdeen mashaariic dhinaca caafimaadka, Biyaha iyo Nadaafada( Wash), shaqo abuurka iyo mashaariic dhinaca nafaqaynta ah.
Waxa kale oo ay labada dhinac intii uu kulanku socday ka wada hadleen mashaariic ay hay’adu ka bilaabi doonto dalka, kuwaasoo wax wayn ka taraya abaaraha soo noqnoqonaya , mashaariicdaas oo ay ka mid yihiin Samaynta Biyo-xidheeno, qodida ceelal laga cabo iyo mashaariic dhinaca daryeelka xoolaha ah oo fulintooda laga bilaabi doona deegaanada Oodwayne iyo deegaano ka mida gobalka Sool.
Waxa kala oo ay labad dhinac isla qaateen sidii loogu dari lahaa Qorshaha Horumarinta Qaranka ee ay diyaarintiisa gacanta ku hayso Wasaaradda qorshayntu qorshayaal lagaga hortagayo abaaraha soo noqnoqnaya
Wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka oo xafiiskisa ku qabilay wafti ka socda EU-da iyo wadamada Somaliland ka taageera dhinaca horumarka
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Somaliland ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay wafti ka socda EU-da iyo Wadamadda Somaliland ka taageera dhinac horumarmka
Kulankan oo ka qabsoomay Xarunta Wasaaradda Qorshaynta Qaranka ayaa wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mud. Maxamed Ibraahim Adam (Qabyo-tire) dhinciisa waxa ku wehilnayey Wasiirku-xigeenka Wasaaradda Mud. Kaysar C/laahi Maxamed, Agaasimaha Waaxda Qorshaynta ee Wasaaradda iyo xubno ka mida gudida gacanta ku haysa diyaarinta Qorshaha labaad ee Qaranka NDP2 ka mida Agaasimayasha
Waftigan oo ay hogaaminayso safiirka EU-da ee Wadamadda Somaliland iyo Somaliya Ms. Veronique Lorenzo waxa ku wehelinayey Safiirka Dalka Denmark ee dalalka Somaliland iyo Somaliya, xubno ka socday waddamada UK, Ireland, France and Netherlands.
Ujeedada waftigan uu dalka u yimid ayaa ahayd xogogaal u noqoshada arimo la xidhiidha dhinaca horumarka sida Qorshaha labaad ee Horumarinta Qaranka NDP2 kaasoo ay diyaarintaa gacanta ku hayso Wasaaradda Qorshaynta Qaranka, Mashaariicda horumarinta ee ay taageeraan wadamada ku bahoobay Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF,Arimaha Doorashooyinka, Abaaraha iyo Mucaawinooyinka gaarka ah ee Somaliland loogu talagay.
Waftigan ayaa intii uu kulanku socday waxay warbixino ku saabsan arimahaasi aynu soo sheegnay ka dhaqaysteen Wasiirka Qorshaynta iyo Wasiirka Ku-xigeenka waxaanay masuuliyiintani waftiga uga warameen xaalada abaaraha iyo baaxada ay leedahay iyagoo xusey inay daba dheeratay islamarkaana ay saamaysay noloshii dadka iyo duunyadaba guud ahaan dalka oo dhan. Waxa kale ay ka dhawaajiyeen sida ay lagama-maarmaanka u tahay in beesha caalamku kaalin wayn ka qaadato gurmadka abaaraha iyadoo labada dhanka kalena dhinaca ka wada hadleen sidii looga gaashaaman lahaa abaarahan soo noqnoqonayaa taasoo u baahan qorshe wax ku ool ah.
Waxyaaba kale ee kulanka lagaga wad hadlay wax aka mid ahaa arimaha doorashada oo ay masuuliyiintan Wasaaradda Qorshaynta Qaranku sheegeen in ay xukuumadd ahaan ka go’antahay inay doorashadu xiligeedi qabsoomto balse ay jiraan ayey yidhaahdeen abaaro ba’an oo saameeyey guud ahaanba noloshii bulshada, taasina ay carqalad ku keeni karto doorashadu inay xiligii loo asteeyey ku dhacdo.
Waxa kale oo ay labada dhinac ka wada hadleen nidaamka mucaawinooyinka u gaarka ah somaliland ee loo yaqaano (Somaliland Special Arrangement) oo ay Wasiirka Qorshaynta iyo ku-xigeenkusuba kala hadleen waftiga iyagoo sheegay inay muhiim tahay arintaasi si waafiya looga wada hadlo heshiisna laga gaadho si halkiisii looga sii ambo-qaado maadama uu kii hore dhamaaday waxaana loo balamay in kulamo danbe lagu gorfayn doono arintaas.
Waxa kale oo kulanka si wayn loogu lafa-guray qorsha Labaad ee Horumarinta Qaranka iyadoo ay kulanka ku sugnaayeen gudida gacanta ku haysa diyaarinta Qorshaha Labaad ee Horumarinta Qaranka. Waxa warbixn ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay, halka ay wax u marayaan iyo qorshaha u yaalaba ka bixiyey Mud. Mubaaark C/laahi Ibraahim (Dalji) oo ah Agaasimaha Waaxda Qorshaynta ee Wasaaradda Qorshaynta waxa iyaguna dhinacdooda soo dhaweeyey qorshan labaad ee Horumarinta Qaranka somaliland xubnihii ka socday waftiga oo balan qaaday inay qaybtooda ka qaadan doonaan hirgalinta qorshan.